Kedu ihe a na-eme ka ọ bụrụ nwata?
Usoro hormonal bụ usoro siri ike. N'ihi homonụ, nke a na-etinye n'ime nwanyị site na okike, mmekọahụ nwere ike ịmị ụmụ ma mụọ ụmụ.
Nwa agbọghọ ọ bụla maara na ihe dị otú ahụ dị ka nsọ nwanyị ga-eso ya ruo mgbe agadi. Ụmụ obere ụmụ agbọghọ, mgbe ha zutere ọbara ọbara site na tract genital, aghọtaghị ihe mere na ihe kpatara nke a. Ma, ihe niile dị mfe: ọ bụ ndị na-agwa nwa agbọghọ ahụ na ọ dịghị ime ọ bụla ma ị nwere ike ịbanye na obere oyi akwa nke endometrium (n'ime ime mgbochi nke akpanwa), nke na-eto eto iji malite ịmalite embrayo, ma ugbu a ọ dịghị mkpa. Otú ọ dị, ihe na-adọrọ mmasị na-eme n'etiti etiti ahụ, site na ịmịnye ọbara ọbara na ndị ọzọ. N'oge a, a na-azụlite nwa, nke dị na okwu dị mfe na-egosi ụdị ihe dị otú a dịka ntọhapụ nke akwa toro, nke dị njikere ịba akwa.
Kedu ka ovulation si eme?
Onye ọ bụla maara na nwanyị nwere ovaries abụọ, nke, dị ka usoro, n'otu n'otu, na oge nke otu ọnwa, àkwá ahụ na-eto. Na mmalite nke oge ọ bụla, usoro a na-ebute ugboro ugboro, nke a ga-eme ma ọ bụrụhaala na nwoke ahụ nwere mmekọahụ na-enwe nsọ nsọ. Akwara, ma ọ bụ "capsule", nke egg nọ na-etolite, na-agbapụ akwa ma na-ahapụ akwa ọkpụkpụ n'oge ọ "amụrụ ya." A na-akpọ usoro a oge nkedo ma ọ bụ n'oge ehihie, nke ga-abụ ihe ziri ezi karị, n'ihi na ntọhapụ akwa ahụ si "capsule" dị n'ime minit 2-3, ọ na-adịkwa ndụ karịa 24 awa.
Kedu otu esi achọpụta ụbọchị ịchọrọ nwa?
Mgbagwoju anya nke nwanyi na-enwe usoro abuo: follicular na luteal. Nke mbụ bụ maka maturation nke àkwá ahụ, nke abụọ abanyekwa maka ịmalite ime ihe na mmepe nke afọ ime. N'ọgwụgwụ nke ọkpụkpụ azụ, enwere ihe dị otú a dị ka ovulation, eziokwu ahụ bụ na a "amụrụ" akwa ahụ mgbe ọ na-ahapụ ngwongwo ahụ wee banye na ngwongwo ahụ, ebe, ma eleghị anya, atụmatụ ga-eme.
Dee ihe omume a dị ịrịba ama, ma ọ bụ ụbọchị ịchụrụ nwa dị mfe, ihe kachasị mkpa bụ na oge ọ bụla ụmụ nwoke na-anọ kwa ụbọchị. Dịka ọmụmaatụ, weghachị oge ụbọchị iri atọ. Usoro nke abụọ, dị ka a na-achị, bụ ụbọchị 14, n'agbanyeghị oge ya. Ya mere, ụbọchị ịchichi agaghị esi ike ịgbakọọ: 30 - 14 = 16. Ya mere, a ga - emepụta nwa maka ụbọchị 16 site na mmalite nke nsọ nsọ.
Otú ọ dị, usoro a anaghị adabere maka ndị inyom nwere oge mgbagwoju anya. Tụkwasị na nke ahụ, ọkpụkpụ nwere ike ịbụ ma n'oge na mbubreyo, nke na-edeghị na nyocha anyị.
Ya mere, ọ bụrụ na ị maghị usoro usoro mgbakọ na mwepụ nke ịgụta ọnụ, ị nwere ike ịbanye ọzọ. N'okwu mbụ, ule a ga-eji nwalee ga-abịa napụta, nke a pụrụ ịzụta na ụlọ ahịa ọgwụ ọ bụla.
Ihe nke abuo na-adabere n'ichebe ihe ngosi basal temperature. Maka nke a, nsọ nsọ kwesịrị ịmalite ozugbo, ma ọ bụrụ na ị na-apụ n'àkwà, iji tụọ okpomọkụ dị ala. Ekwesiri ighota na ura na-acho n'iru mgbe ekwesiri ibu ihe kariri awa 6. N'ụbọchị a na-akpa nwa, na eserese, ị ga-ahụ ọkwa mmiri dị elu elu (ọ dịkarịa ala site na 0.3 ogo).
Ya mere, na okwu dị mfe, ịzụ nwa, ma n'ime ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị - bụ ihe dị otú ahụ na ọ ga - eme ka mmalite mmalite nke ime ime na 70% nke ikpe ma ọ bụrụ na enwere mmekọahụ na-enweghị nchebe n'oge a. O kwesiri icheta na ruo ụbọchị ise tupu ụbọchị a ga-azụ nwa na ụbọchị mgbe ọ gachara, ọ ga-adaba na ịhapụ ọrụ ọ bụla na-enweghị nchebe, ọ gwụla, ị na-eme atụmatụ ime ime. Nke a bụ isi ihe siri ike, n'ihi na ndị dọkịta egosila na n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ovum na-ebi nanị otu ụbọchị, spermatozoa nwere ike ịnọgide na-agagharị na tract nwanyị ahụ maka ụbọchị ise.
Ovulation bụ ntọhapụ nke ovule ahụ site na ngwugwu, na usoro ihe omume a bụ otu maka ụmụ agbọghọ na ụmụ nwanyị tozuru okè. Ihe omuma a enweghi oke oge ma mee mgbe ogologo nwanyi na-aga kwa ugbua.
Curantil na-eme atụmatụ afọ ime
Azu nke nwanyị
Ihe na-emepụta na ụmụ nwanyị
Ntughari nke tubes
Kedu ka ụka si jikọọ na IVF?
Ihe kpatara IVF
Kedu ka esi kwakọta ụbọchị ịchọrọ nwa?
Bovine akpanwa maka ụmụ nwoke
Anyi na - eme ihe - gini ka o bu?
Mkpụrụ nke agba odo
Pike na-etinye ya na oven na foil - ụtọ ụtọ ntụziaka nke azụ azu
Kedu ugogbe anya maka ịhọrọ?
Ehee graerelles na poteto
Labrador - njirimara nke ụdị
Ewu na-ekpuchi si anụ ọhịa bea
Sophie Turner nwere ịhụnanya na rugby-bustler
Aha maka Husky
Na-eri nri-juju maka ịsa ahụ
Ihe ngosi nke ịhụnanya maka nwa agbọghọ
Mmetụta na mmetụta uche - ọdịiche
Ajọ ifufe maka ụkọ ọnwụ
Uwe maka ụlọ ọrụ - iwu nke foto azụmahịa
Na-eji akwa oyi-ezumike 2015-2016
Ntughari na windo windo - otua esi ebu agha?
Utu - uzommeputa
Czech Republic visa na gị onwe gị
Banki maka ngwa nri
Nkuru na nkịta
Kedu ka esi ghọta na nwoke nwere ịhụnanya?
Sweat ụkwụ - ihe ị ga-eme?
Ụbọchị nne nne na Russia